कसरी खेलिन्छ टेस्ट क्रिकेट? Letzcricket - Cricket News Articles From Around the Globe
कसरी खेलिन्छ टेस्ट क्रिकेट?
28th August 2018, Tuesday
#test cricket #how is cricket played #
हामी सबैले टेस्ट क्रिकेटको बारेमा सुनेकै छौं तर के तपाईंलाई थाहा छ टेस्ट क्रिकेट कसरी खेलिन्छ? क्रिकेटको खेलको सबैभन्दा लामो रूप हो टेस्ट क्रिकेट र यसको स्तर निकै उच्च मानिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सील (आईसीसी) द्वारा निर्धारित "टेस्ट स्टेटस" पाएका राष्ट्रिय टोलीहरू बीच टेस्ट म्याचहरू खेलिन्छन्। टेस्टमा दुई टिमका ११-११ खेलाडीहरु चार-पारी खेल्छन्, जुन पाँच दिनसम्म (वा केही ऐतिहासिक घटनाहरूमा लामो समयसम्म) हुन सक्छ। यसलाई सामान्यतया टोलीहरूको खेल क्षमता र सहनशीलताको सबैभन्दा पूर्ण परीक्षा मानिन्छ। "टेस्ट" भन्नाले खेलाडीको दुवै मानसिक र शारीरिक क्षमताको परीक्षण हो।
पहिलो आधिकारिक मान्यता प्राप्त टेस्ट म्याच, १५ मार्च १९७७ मा इङ्गल्याण्ड र अष्ट्रेलिया बीच मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउण्डमा खेलिएको थियो। उक्त टेस्ट अष्ट्रेलियाले ४५ रनले जितेको थियो। टेस्ट क्रिकेटको १०० वर्ष मनाउन, १२-१७ मार्च २०१७ मा इंग्ल्यान्ड र अस्ट्रेलिया विच मेलबर्नमा टेस्ट आयोजना भएको थियो। पुनः उक्त खेलमा पनि अष्ट्रेलियाले इंग्ल्यान्डलाई ४५ रनले पराजित गरेको थियो जुन पहिलो टेस्टको नतिजासंग समान थियो।
अक्टोबर २०१२ मा, आईसीसीले टेस्ट म्याचको लागि दिन/रात टेस्ट म्याच को समेत अनुमति दियो। पहिलो दिन/रातको टेस्ट अष्ट्रेलिया र न्यूजील्याण्ड बीच एडिलेड ओवलमा २७ नोभेम्बर देखि १ सेप्टेम्बर 2015 को बीचमा भएको थियो र उक्त खेलमा पिंक बलको प्रयोग भएको थियो।
अब जानौं यस खेल कसरी खेलिन्छ:
टेस्ट म्याच सेतो जर्सी लगाई, रातो बलले, दिनको लगभग ७ घन्टा, ५ दिनसम्म खेलिन्छ। साधारणतया टेस्ट खेलमा चार पारी खेलिन्छन्, प्रत्येक टोलीले दुई पटक ब्याटिंग र दुई पटक बलिंग गर्न पाउंछन्। पहिलो दिन खेल्न सुरु गर्नुअघि, दुई टोलीका कप्तान र म्याच रेफ्री सिक्का टस गर्छन्; टस जित्ने कप्तानले ब्याटिंग या बलिंग रोज्छन्।
पहिलो पारी सकिएपछि टिमहरुको ब्याटिंग र बलिंग पनि पालैपालो चेन्ज हुन्छ (मतलब ब्याटिंग गर्नेले बलिंग र बलिंग गर्नेले ब्याटिङ)। दुई पारीमा जुन टिमले अधिक रन बनाउछ उक्त टिमले खेल जित्छ। टेस्टका ५ दिनमा हरेक दिन विचमा दुई पटक (४० मिनेट लन्च र २० मिनेट चिया) ब्रेक हुन्छ र फिल्डिंग गर्ने हरेक टिमलाई ८० ओवर बलिंग गरे पछि अर्को नयां बल दिईन्छ।
Draw कसरी हुन्छ?
टेस्ट मात्र क्रिकेटको यस्तो फर्म्याट हो जसमा ड्र हुन्छ। जब अन्तिम ईनिंग खेल्ने टिमले खेलको अन्त्य सम्म पनि विकेट नगुमाई टार्गेट पुरा नगरेमा खेल ड्र हुन्छ।
Declare गर्ने भनेको के हो?
टिम कप्तानले, खेल जित्नको लागि बोर्डमा पर्याप्त रन पुगेको ठहर गरी ईनिंग Declare गरी आफ्ना ब्याट्सम्यानलाई पविलियन बोलाउंछन्। यस पश्चात विपक्षी टिमको सम्पुर्ण विकेट लिई खेल आफ्नो पक्षमा पार्नतर्फ केन्द्रित हुन्छन्। यो कप्तानको निकै रणनैतिक चाल मानिन्छ।
Follow on भनेको के हो?
यदि दोस्रो पारी खेलेको टिम पहिलो पटक ब्याटिंग गरेको टिम भन्दा २०० वा त्यो भन्दा बढी रनले पछाडी रहंदै अल आउट भएमा, उक्त दोश्रो पारी खेल्ने टिमलाई पुन: तेश्रो ईनिंगमा समेत ब्याटिंग गर्न दिईन्छ। यसमा दोश्रो टिम फलो अनमा परेको भनिन्छ। यदि तेश्रो ईनिंगमा समेत दोश्रो टिमले लक्ष्य पुरा नगरेमा, उक्त खेल पहिलो टिमले एक ईनिंग र लक्ष्यबाट बांकी रहेको रनले जित्छ।
टेस्ट म्याच कसरी जितिन्छ?
उदाहरणको लागि हाल भईरहेको भारत र ईंग्ल्यान्डको तेश्रो टेस्ट हेरौं। हिलो ईनिंगमा भारतले ब्याटिङ गर्दा आफ्नो सम्पुर्ण विकेट गुमाई ३२९ रन बनायो, पहिलो ईनिंगको समाप्तीपछि ईंग्ल्यान्डले ब्याटिंग गरी १६१ रनमै सिमित भयो, ईनिंगको समाप्तीमा ईंग्ल्यान्ड १६८ रनले पछाडी रह्यो। भारतले आफ्नो दोश्रो ईनिंगमा ७ विकेट गुमाउंदा ३५२ रन बनाई Inning Declare गर्यो, जुन स्कोर अब ईंग्ल्यान्डको टिम टोटल भन्दा ५२० रनले अगाडी हो। आफुलाई जित्नको लागि ५२० रन पर्याप्त देखेर भारतीय टिम कप्तानले उक्त स्कोरमा ईनिंग सकिएको घोषणा गरे र ईंग्ल्यान्डलाई ब्याटिंगको निम्तो दिए। अब ईंग्ल्यान्डले भारतलाई जित्न त्यो स्कोरभन्दा माथि पुर्याउनु पर्नेमा ईंग्ल्यान्डले आफ्नो दोश्रो ईनिङमा सबै विकेट गुमाई ३१७ रनमात्र बनायो। जुन स्कोर भारतको टोटल स्कोर भन्दा २०३ रन पछाडी हो, त्यसैले भारतले ईंग्ल्यान्डलाई २०३ रनले जित्यो। यदि ईंग्ल्यान्डले अन्तिम दिनसम्म आफ्नो सम्पुर्ण विकेट नगुमाएको भए खेल ड्र हुनेथियो।
टेस्ट खेलमा ईनिङ र रन दुवैले कसरी जितिन्छ?
उदाहरणका लागि हाल भारत ईंग्ल्यान्डको दोश्रो टेस्ट हेरौं। भारत पहिलो ईनिंगमा १०७ रनमै समेटियो, जवाफी ब्याटिंगमा आएको ईंग्ल्यान्डको टिमले आफ्नो पहिलो ईनिंगमा ७ विकेट गुमाएको अवस्थामा ३९६ रनमा ईनिंग Declare गर्यो, आफ्नो दोश्रो ईनिंगमा भारत पुनः १३० रनमै समेटियो जुन दुई ईनिंगको स्कोर ईंग्ल्यान्डले एक ईनिंगमै बनाएको स्कोर भन्दा १५९ रन कम हो। ईंग्ल्यान्डको एक ईनिंग बांकी नै छंदा, भारतले दुवै ईनिंङ खेल्दा समेत १५९ रनले पछि पर्यो। त्यसैले यस खेल ईंग्ल्यान्डले १ ईनिंग र १५९ रनको फरकले जित्न सफल भयो। यस खेल ईंग्ल्यान्डमा १०० वर्ष खेलिएको टेस्ट मध्य तेश्रो छोटो टेस्ट बनेको थियो। मा
टेस्ट दिनको लगभग ९० ओवर खेलिन्छ तर विचमा खराब मौसम या खराब लाईटको समस्या परिआए, त्यस्को क्षतिपुर्ति स्वरुप अर्को दिन थप १ घन्टा खेल्न सकिन्छ। यदि कुनै टिम खेल सकिने बेला, जीतको नजिक पुगे थप आधा घन्टा भने माग्न पाईन्छ। टेस्ट निकै रणनैतिक खेल हो, त्यसैले फरक कप्तानका फरक रणनितीले यस खेल कुनै बेला फरक फरक पनि हुने गर्छन्।